YATHAZONE - Page 10 of 95 - NEWS and ENTERTAINMENT
နဖူးကို ကြင်ကြင်နာနာ နမ်းခြင်းရဲ့ အဓိပ္ပာယ်
နဖူးကို ကြင်ကြင်နာနာ နမ်းခြင်းရဲ့ အဓိပ္ပာယ် ချစ်သူရဲ့ နဖူးလေးကို ကြင်ကြင်နာနာ နမ်းဖူးတဲ့ သူတွေ ရှိသလို အနမ်းခံရဖူးတဲ့ သူတွေလည်း ရှိမှာပါနော်။ အများအားဖြင့်တော့ အမျိုးသားတွေက အမျိုးသမီးတွေကို နမ်းလေ့ရှိတဲ့ အနမ်းလေးပါ။ ပါးနဲ့ နှုတ်ခမ်းကိုမဟုတ်ဘဲ နဖူးလေးကို နူးနူး ညံ့ညံ့လေး သူအနမ်း ချွေလိုက်တဲ့အခါ ရင်ထဲမှာ နွေးထွေး ကြည်နူးရတဲ့ အခိုက်တန့်လေး ချစ်သူတိုင်းမှာ ရှိကြမှာပါ။ ကိုယ့်ချစ်သူ ကိုယ့်ကို ဘယ်အချိန်မှာ နဖူးကို နမ်းတယ်လို့ သင် သတိထားမိလဲ။ ဘာလို့ နမ်းတယ်လို့ ထင်သလဲ။ ၁။ သင်တစ်ခုခုကို မကျေမနပ် ဖြစ်နေတဲ့အခါ သင်တစ်ခုခုကြောင့် စိတ်မကျေမနပ် ဖြစ်နေတဲ့အခါ ချစ်သူက သင့်နဖူးကို …
အသက်ကွာသူကို ချစ်မိတဲ့အခါ ရလာတဲ့အချက်များ
အသက်ကွာသူကို ချစ်မိတဲ့အခါ ရလာတဲ့အချက်များ အချစ်မှာ အသက်အရွယ်ဆိုတာမရှိဘူး နှစ်ဦးနှစ်ဘက် ချစ်ရင်ပြီးတာပဲလို့ ဆိုကြတယ် ။ တကယ်တမ်း ချစ်လို့ တွဲပြီဆိုတော့မှ ပြဿနာကစတာ ။ တစ်ခုပြီးတစ်ခုနဲ့ မဆုံးနိုင်တော့ဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အသက်ခြင်း တအားကွာနေပြီဆို ဘဝဖြတ်သန်းတာခြင်းလည်း မတူတော့ပါဘူး ။ အမြင်နဲ့ခံယူချက်တွေကလည်းကွာကြတယ် ။ ဒီဒုက္ခတွေကတော့ အသက်ကွာလွန်းသူကို ချစ်မိသူတိုင်း ကြုံရတဲ့ဒုက္ခတွေပဲဖြစ်ပါတယ် ။ လွှမ်းမိုးခြင်း အသက်ကြီးတဲ့သူကလည်း သူကအကြီးမို့ သူပြောတာနားထောင်စေချင်တယ် ။ အနိုင်လိုချင်တယ် ။ ငယ်တဲ့သူကလည်း အငယ်မို့ ဆိုးနွဲ့ပြီးအနိုင်ရချင်တယ် ။ အလျှော့ပေးစေချင်တယ် ။ အကြိုက်မတူခြင်း ဒါ က လည်း သိပ် မ ဆန်း တဲ့ …
မင်းကို အရမ်းချစ်ဖို့ (3)မိနစ်လောက် အချိန်ပေးပြီးဖက်လိုက်ပါ…
မင်းကို အရမ်းချစ်ဖို့ (3)မိနစ်လောက် အချိန်ပေးပြီးဖက်လိုက်ပါ… 3မိနစ်လောက် အချိန်ပေးပြီးဖက်လိုက်ပါ…. သူက မင်းကို တစ်အားလည်းရစ်တယ် ။စိတ်ကောက်ရင်လည်း ခဏ ခဏ ပဲ ။သဝန်တိုတာလည်း အကြိမ်ကြိမ် ။ ဘယ်မှာလဲ ? ဘာလုပ်နေလဲ ?ဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေ နဲ့ မင်း ကို မေးနေ ၊ ပြောနေတာ ကို မင်း က သံသယ မျက်လုံးတွေ နဲ့ အကြည့်ခံနေရတယ် ဆိုပြီး မကြိုက်ဘူး။ အဲ့လို များ ထင်ရင် အကြီးကြီးလွဲပြီပေါ့ ။တစ်ခါတစ်ရံမှာ လူတွေက သိပ်ကို ချစ်မိသွားရင် အချစ်ကြီးလာတတ်ကြတယ် ။ အချစ်ကြီးပြီ ဆိုတာနဲ့ …
ချစ်သူတွေအချင်းချင်း နမ်းတော့မယ်ဆိုရင် သိထားသင့်တဲ့ အချက်များ
ချစ်သူတွေအချင်းချင်း နမ်းတော့မယ်ဆိုရင် သိထားသင့်တဲ့ အချက်များ ကိုယ်က ကောင်မလေး တစ်ယောက်နဲ့ ချစ်သူတွေတော့ ဖြစ်သွားပါရဲ့ ဒါပေမယ့် FA ဘဝက လာတဲ့သူတွေဆိုတော့ ကောင်မလေးတွေရဲ့ အထာလည်းမသိ အရိပ်အ ကဲလည်း နားမလည် အဲလိုအနေအထားနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ ကောင်မလေးကို အနမ်းပေးဖို့ ကြိုးစားတဲ့အခါ တစ်လွဲတွေ ဖြစ်ကုန်တတ်ပါတယ်။ လူရှေ့သူရှေ့မှာ နမ်းဖို့ ကြိုး စားမိလို့ ကောင်မလေးက ရှောင်ထွက် သွားပြီး ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း သူများတွေ ဝိုင်းလှောင် တာလည်း ခံရနိုင် သေးတယ် ဒါကြောင့် ဒီအချက်တွေကို အရင်လေ့ လာထားပြီး ရှောင်သင့် တာရှောင် ဆောင်သင့်တာ ဆောင်မှ တော်ရုံကျမယ်နော်။ ၁- သူငယ်ချင်းတွေရှေ့မှာ နမ်းဖို့ …
သင့်ဘဝလက်တွဲဖော်ကို ဒီလိုအကြောင်းအရာတွေနဲ့ ရွေးချယ်သင့်တယ်
သင့်ဘဝလက်တွဲဖော်ကို ဒီလိုအကြောင်းအရာတွေနဲ့ ရွေးချယ်သင့်တယ် ဘဝလက်တွဲဖော်ဆိုတာအပျော်ထားအပ်တဲ့ အရာမဟုတ်လို့ဖျော်ရည်အတူ သောက်နိုင်ရုံနဲ့လည်းမရွေးချယ်သင့်ဘူး ဘဝလက်တွဲဖော်ဆိုတာယမကာ တစ်ပုလင်းမဟုတ်လို့ခဏတာ ယစ်မူးချင်ရုံအတွက်နဲ့လည်းမရွေးချယ်သင့်ဘူး။ဘဝလက်တွဲဖော်ဆိုတာခဏတာအတွက်မဟုတ်လို့တွေ့ကရာလူရှာမယ် စိတ်ကူးနဲ့လည်းမရွေးချယ်သင့်ဘူး ဘဝလက်တွဲဖော်ဆိုတာအာပလာလူတစ်ယောက်မဖြစ်သင့်သလိုအချစ်သာ အဓိကဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့လည်းမရွေးချယ်သင့်ဘူး။ဘဝလက်တွဲဖော်ဆိုတာပညာတတ် ဂုဏ်ကြီးကျယ်တဲ့ဘွဲ့လက်မှတ်ရှိရုံနဲ့လည်းမရွေးချယ်သင့်ဘူး ဘဝလက်တွဲဖော်ဆိုတာဥစ္စာကြွယ်ဝ တိုက်တာကားများပိုင်ဆိုင်ရုံနဲ့လည်း မရွေးချယ်သင့်ဘူး။ဘဝလက်တွဲဖော်ဆိုတာကိုယ်တစ်ယောက်အတွက်သာသေဖော်ရှင်ဖက်ဖြစ်သူမရှိအတူ ရှိအတူနားလည်မှုပေးနိုင်သူသာရွေးချယ်ပါ။ ဘဝလက်တွဲဖော်ဆိုတာမိမိရဲ့ချို့ယွင်းချက်မှန်သမျှကိုသိသိကြီးနဲ့ လုံးဝနောက်ဆုတ်တွေဝေသွားခြင်း ဆိုတာမရှိဘူး …နောကဆုံးထွက်သက်ထိ မိမိရဲ့လက်ကိုရဲဝင့်စွာကိုင်ဆွဲပြီး ဖြစ်ပေါ်လာသမျှပြသနာပေါင်းစုံကို အတူတူဖြေရှင်းပေးမဲ့သူလေ ဂရုစိုက်မှု့၊ ယုံကြည်ပေးမှု့တွေနဲ့ပေးဆပ်ပြီး ထာဝရချစ်နေမဲ့သူဟာမိမိရဲ့ဘဝလက်တွဲဖော် စစ်စစ်ပါပဲ။ဘဝလက်တွဲဖော်ဆိုတာကြုံသလိုရွေးချယ်လို့ရဘူးလေကိုယ့်ဘဝနဲ့ အံဝင်ခွင်ကျတဲ့သူ ဖြစ်ဖို့လိုတယ် ဘဝဘက်တွဲဖော်ဆိုတာအရမ်းချမ်းသာဖို့မလိုဘူး ကိုယ်နဲ့အတူ ချမ်းသာအောင်ကြိုးစားတဲ့သူ ဖြစ်ဖို့လိုသလိုဆင်းရဲတဲ့အခါလည်းကြံ့ကြံ့ခံရင်ဆိုင်ရဲတဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုတယ် ဘဝလက်တွဲဖော်ဆိုတာ ပန်းချီကား တစ်ချပ်လိုပါပဲ ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးနိုင်ဖို့ထက်ခံစားနားလည်ပေးတတ်ဖို့က ပိုအရေးကြီးပါတယ်…။ Crd Zawgyi သင့္ဘဝလက္တြဲေဖာ္ကို ဒီလိုအေၾကာင္းအရာေတြနဲ႔ ေ႐ြးခ်ယ္သင့္တယ္ ဘဝလက္တြဲေဖာ္ဆိုတာအေပ်ာ္ထားအပ္တဲ့ အရာမဟုတ္လို႔ေဖ်ာ္ရည္အတူ ေသာက္ႏိုင္႐ုံနဲ႔လည္းမေ႐ြးခ်ယ္သင့္ဘူး ဘဝလက္တြဲေဖာ္ဆိုတာယမကာ …
အမေဖြစ်သူကို မရခဲ့ပေမယ့် လက်မလျှော့ ဘဲနဲ့ ကြိုး စားခဲ့လို့ နောက်ဆုံးမှာ သမီးဖြစ် တဲ့သူကို လက်ထပ်ယူ နိုင်ခဲ့တဲ့ အဘိုးအို
အမေဖြစ်သူကို မရခဲ့ပေမယ့် လက်မလျှော့ ဘဲနဲ့ ကြိုး စားခဲ့လို့ နောက်ဆုံးမှာ သမီးဖြစ် တဲ့သူကို လက်ထပ်ယူ နိုင်ခဲ့တဲ့ အဘိုးအို အသက် ၅၈ နှစ်ရှိသော အင်ဒိုနီးရှား အမျိုးသား တစ်ဦး က သတို့သမီးရဲ့ အမေဖြစ်သူမှ ငြင်းဆိုပြီး နောက် ၁၉ နှစ် အရွယ် သမီးဖြစ်သူ နဲ့ လက် ထပ်ခဲ့ပါတယ် ။ ၎င်းအသက် ၅၈ နှစ် သတို့သား Bora ကတစ်ကိုယ် တည်းသမား ဖြစ်ပါတယ် သ တို့ သမီး Fazillah က မောင် နှမ သုံးယောက် ထဲမှာ အကြီးဆုံး သမီးဖြစ်ပြီး …
ချစ်ဖို့အရမ်းကောင်းတဲ့ ကောင်မလေးတွေရဲ့ စိတ် (၆) ခု
ချစ်ဖို့အရမ်းကောင်းတဲ့ ကောင်မလေးတွေရဲ့ စိတ် (၆) ခု ၁ – ချော့မယ့်သူသာ ရှိရင် ပိုပြီး ငိုချင်တတ်တာ လေးရယ် ၂ – တစ်ချက် တစ်ချက် ကိုယ့်အတွေးနဲ့ကိုယ် ပြန်ပြန် နှိပ်စက် နေတဲ့ သဝန်တိုမှုလေးရယ် ၃ – စကားချင်း စစ်ခင်းလို့ နိုင်ရင်နိုင် မနိုင်ရင် ရှက်ရမ်း ရမ်းပြီး ကိုက်တတ်တာလေးရယ် ၄ – တစ်ခါတစ်လေ အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင် ရင့်ကျက်တဲ့ စကားတွေနဲ့ ဆိုဆုံးမလေ့ ရှိတတ်တာလေးရယ် ၅ – ပျော်နေတဲ့အချိန် ” သာလိကာ ” လေးလို စကားများပေမယ့် စိတ်မကြည်ရင် စူပုတ်ပုတ် မျက်နှာနဲ့ ဟန်ဆောင်မှု …
ရှားစောင်းလက်ပတ်နဲ့ ပေါင်းတင်သူများ သတိထားကြပါနော် (လှပတဲ့ အသားရည်လေးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ) ရှားစောင်းလက်ပတ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အထူးသတိထားရမယ့် အချက်လေး တစ်ချက်ကို မျှဝေချင်ပါတယ် အလှအပ​​ရေးရာမှာ ရှားစောင်းဟာ နာမည်ကြီးပါတယ်။ သူ့ကောင်းကျိုးတွေ အသုံးဝင်ပုံတွေ အသုံးပြုပုံတွေကတော့ အတော်များများ သိပြီးဖြစ်လို့ မပြောတော့ပါဘူး ။ သတိထားရမှာကတော့ ရှားစောင်းကို အသုံးမပြုခင်မှာ အဝါရောင် အဆိပ်ကို မဖြစ်မနေ ထုတ်ပေးဖို့ပါဘဲ ။ ရှားစောင်း အပင်ကနေ အရွက်ကလေးကိုဖြတ် ရေဆေးပြီး မျက်နှာကိုသုတ်ပြီး လိမ်းမယ်ဆိုရင်တော့ ရှားစောင်းမှာပါတဲ့ အဆိပ်တွေကို အရေပြားအတွင်း ထိုးသွင်းသလို ဖြစ်ပြီး အန္တရာယ်များပါတယ်။ ရှားစောင်းသုံးပြီး အရေပြားယားတာ ဝက်ခြံတွေ ထွက်လာဟာ အဲ့ဒီအဆိပ်ကြောင့်ပါ။ ဒါကြောင့် အသုံးမပြုခင် အဆိပ်ထုတ်ပေးဖို့ …
အဆင့်အတန်း ရှိတဲ့ အမျိုးသမီးဖြစ်ဖို့ ရောက်လေရာမှာလိုက်နာသင့်တဲ့ အချက် (၅) ချက်
အဆင့်အတန်း ရှိတဲ့ အမျိုးသမီးဖြစ်ဖို့ ရောက်လေရာမှာလိုက်နာသင့်တဲ့ အချက် (၅) ချက် အဆင့်အတန်း ရှိတဲ့သူတစ်ယောက်မှန်း သိရှိနိုင်မယ့်အချက်ကတော့ လူအများရှေ့မှာ ဘယ်လိုပြုမူနေထိုင်သလဲ ဆိုတာကနေပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားပြီး လူကြားသူကြားထဲမှာ ပစ်စလက်ခက် မနေတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ကို ရောက်လေရာတိုင်းမှာ လူတွေက အဆင့်အတန်း ရှိတဲ့ အမျိုးသမီး တစ်ယောက်လို့ မြင်စေချင်ရင် ဒီအချက်တွေကို လိုက်နာပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် (၁) မိတ်ကပ် နဲ့ဆံပင်=လူကြားသူကြားထဲမှာ ခေါင်းဖီးတာတွေ- မိတ်ကပ်ဖို့တာတွေက ရှောင်ရှားသင့်တဲ့ အလေ့အကျင့်တွေဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ပြင်ဆင်ချင်တယ်ဆိုရင်တောင် သန့်စင်ခန်းထဲမှာ ပြင်ဆင်တာ အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ (၂) ကြိုတင္ဆက်သြယ္ပါ=တစ်ယောက်ယောက်ထံကို အလည်သွားတော့မယ်ဆိုရင် သူ့ကို ကြိုတင်ဆက်သွယ် အကြောင်းကြားထားပါ။ နောက်ပြီး သင်မစားတဲ့ အစားအစာရှိရင်လည်း ကြိုပြီးပြောထားဖို့လိုပါတယ်။ ချိန်းထားတဲ့အခါမှာလည်း …
တောက ရမ်းကု ဒေါက်တာနဲ့ မြို့က ပညာစမ်းတဲ့ မမတွေ့ကြလေသောအခါ… နယ်မြို့သေးသေးလေးတွေမှာ… ရမ်းကုတွေခေတ်ကောင်းစဉ်ကပေါ့ ရမ်းကုတယောက်ကတော့ တော်တော်နာမည်ကြီးတယ် ကြီးရတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်း ဘာရောဂါပဲဖြစ်ဖြစ် သူပေးတဲ့ဆေးကတော့.. ဘာမီတွန်ပဲအာ့ကြောင့် နာမည်အရင်းတောင်ပျောက်ပြီး အားလုံးသိကြတာကတော့ သူ့နာမည် ဒေါက်တာဘာမီတွန် တနေ့တော့ .. မြို့ကြီးကနေ အလည်ရောက်လာတဲ့ မတ်မတ်တယောက်က ဒေါက်တာဘာမီတွန်ကို ပညာစမ်းချင်လို့ သူ့သမီးလေးကိုခေါ်သွားပြီး” ဆရာ ကျွန်မသမီးလေးဖျားချင်သလိုလိုဖြစ်နေလို့ပါ ” ဆိုတော့… ပေးလိုက်တဲ့ဆေးက ဘာမီတွန်ပဲ အာ့နဲ့ နောက်ရက်မှာတခါထပ်သွားတယ်” ဆရာ ကျွန်မနူံးညောင်းပြီး ခေါင်းမကြည်သလိုဖြစ်နေလို့ပါ ” ဆိုတော့… ပေးလိုက်တဲ့ဆေးက ဘာမီတွန်ပဲ မတ်မတ်လည်း သိပ်တော့မကျေနပ်သေးဘူး ဒီရမ်းကု ဘာမီတွန်ဆေးပေးလို့မရအောင် ဘာရောဂါလို့ပြောရမလဲ အသည်းသန်စဉ်းစားနေရတာ နှစ်ရက်သုံးရက်လောက်ကြာသွားတယ် အဲ ! …
This Year : 1016
Total Users : 253818
Total views : 688846